Filtrer les éléments par date : mercredi, 24 octobre 2018
Andapa: Nirefotra ny basy, olona roa maty, dimy hafa naratra mafy
Tovolahy namono zaza kely roa tao Andasibe Maheverika no niandohany. Tranga niseho tamin'ny alatsinainy 22 oktobra teo.
Voasambotra ilehio ary eo ampelan-tanan'ny zandary atao famotorana.
Androany tamin’ny efatra ora hariva anefa dia nisy andian'olona avy any Andasibe Mahaverika Andapa nirohotra nanoloana ny tobin'ny Zandary, nitaky ny hamoahana ilay tovolahy, hampiharana fitsaram-bahoaka, izay tsy eken'ny lalàna misy eto amintsika, ka izay no nahatonga ny fifandonana, faritra mena rahateo ny tobin'ny Zandary.
Nitifitra ireo Zandary, roa no namoy ny ainy, dimy maratra mafy raha ny tarehimarika vonjimaika.
mercredi, 24 octobre 2018 18:56
Fenoarivo Atsinanana: Polisy telo lahy matin'ny fitsaram-bahoaka
Miasa ao amin'ny Police Économique Toamasina izy ireo, ary nanatanteraka iraka any an-toerana, no nataon'olona fitsaram-bahoaka rehefa nanao "perquisition", izay tamin'ny fomba ara-dalana, araka ny taratasy avy amin'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina momba ny resaka lavanila.
Inspecteur daholo izy telo lahy, Hajarinofy, Abdy, Brillant ary nanao badge ara-dalana.
Mpandraharaha lavanila iray ao Ambodihazinina anaovana fanadihadiana no nanirahana azy ireo androany. Niantso vonjeo ho misy manafika ilay mpandraharaha, ity farany izay vao nisy nanafika tamin'ny sabotsy teo.
Ankatso: Salon de l'étudiant de l'Université d'Antananarivo
Tanterahina eo amin'ny Esplanade Ankatso manomboka androany ary haharitra hateloana ity hetsika ity, izay maimaimpoana.
mercredi, 24 octobre 2018 15:22
Aujourd'hui, 24 octobre, on fête aussi la Journée des Nations Unies.
mercredi, 24 octobre 2018 14:52
CCI Ivato: Manasa ny antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ireo Kandida
Manasa ireo antoko politika rehetra, sy ny fiarahamonim-pirenena, rahampitso 25 oktobra eny amin'ny CCI Ivato, ireo vondron'ny Kandida handray anjara amin'ny Fihaonambem-pirenena Mahefa.
La première édition de la Foire Internationale des Gemmes et Bijoux de Madagascar a ouvert ses portes ce 23 octobre, et ce jusqu’au 27, au Mining Business Center, à Mamory, Ivato.
Elle est organisée conjointement par le Ministère des mines et du pétrole, le Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) et l’Institut de Gemmologie de Madagascar, afin de contribuer à la promotion du secteur minier, tant au niveau national qu’international.
Tsipy kanetibe: Mankalaza ny faha-15 taonany ny Club Bouliste UNOH Antsirabe
Hetsika goavana no hanamarihana ny faha-15 taona nijoroan'ny CBU (Club Bouliste UNOH) tarihin'i Dr Rasamimanana Honoré Gabriel, filoham-boninahitry ny klioba.
Fiara iray na vola 6 tapitrisa Ariary no loka amin’ny fifaninanana nampitondraina ny anarana “Grand Open”, hatao eny amin’ny kianjan’ny Star Antsirabe.
Isan’ny klioba matanjaka eto Madagasikara ny CBU. Efa maro ny amboara azony nanerantany sy taty Afrika, ary isan’ny namokatra mpialao kalaza koa.
mercredi, 24 octobre 2018 09:32
Oniversiten'i Toamasina: Misavorovoro
Nampiato ny fampianarana ao Barikadimy ny filohan'ny oniversiten'i Toamasina, Velo Jérôme, noho ny grevy misy ao an-toerana efa ho roa heinandro izao.
Ny antony dia ny fampiharana ny rafitra LMD (Licence-Master-Doctorat) tamin'ny fomba fanaovana ny fanadinana farany teo, ka niteraka tsy fahafahana maro teo amin'ny mpianatra.
Mitaky ny "compensation de note" ireo mpianatra, mitaky ny fametraham-pialan'ny filohan'ny oniversite, ary mitaky ny fanalana ny sojabe ny DEGMIA ihany koa.